အင်တာနက်ကိုဝန်ကြီးဌာနများ - Category: ဘလော့
ကျနော်တို့ undenominational ဖြစ်ကြသည်နှင့်မျှမတို့ဗဟိုဌာနချုပ်သို့မဟုတ်သမ္မတရှိသည်။ အသင်းတော်၏ဦးခေါင်းယေရှုခရစ်သည်ကိုယ်တော်တိုင် (1-22 ဧဖက် 23) ထက်အခြားအဘယ်သူမျှဖြစ်ပါတယ်။
ခရစ်တော်၏အသင်းတော်များ၏တစ်ဦးချင်းစီအသငျးတျောကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖြစ်ပြီး, သူကတစ်ဦးကယုံကြည်ခြင်းက (ဧဖက် 4: 3-6) သို့ကျွန်တော်တို့ကိုမှီဝဲသောဘုရားသခငျ၏တရားစကားတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်နှင့်သူ၏တမန်တော်များ၏သွန်သင်ချက်များနှင့်လူမ၏သွန်သင်လိုက်နာပါ။ ကျနော်တို့သာခရစ်ယာန်များအများမှာ!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ရက်ကရန်အဆင့်မြှင့်အပေါငျးတို့သပြီးစီးခဲ့ပြီမကြာသေးမီကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အက်ဘ်ဆိုက်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ။ ယခုအသစ်အွန်လိုင်းမူဘောင်ညျဘုရားသခငျ၏ သာ. မြတ်သောလမ်းကိုရှာသောခရစ်တော်နှင့်လူအပေါင်းတို့၏အသင်းတော်များအကျိုးခံစားရဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်သောအခြေခံအဆောက်အအုံပိုကောင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခရစ်တော်၏အသင်းတော်များအစေခံမညျဖွစျကွောငျး features အသစ်နှင့်တိုးမြှင့်မှုများတဲ့နံပါတ်ကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။
ခရစ်တော်၏အသင်းတော်များများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Worldwide မှ Directories ဒီဇိုင်းခဲ့ကြနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကိုအန်းဒရွိုက်စမတ်ဖုန်းများနှင့် iPhone များအတွက်အခမဲ့ app ကိုပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့အွန်လိုင်းခရစ်တော်၏အသင်းတော်များများအတွက်အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်. စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ကြသည်။ သင်တို့တွင်တဦးချင်းစီထာဝရဘုရား၏စပျစ်ဥယျာဉ်ထဲမှာလုပ်နေတာသောသူအပေါင်းတို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကြှနျုပျတို့၏ဓမ်မအဘို့သင့်မေတ္တာနှင့်ထောက်ခံမှုသည်အလွန်တန်ဖိုးထားသည်။